Zvikoro Zvesangano​— Zvinoratidza Rudo rwaJehovha | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bicol Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Malagasy Malay Ndebele Ndonga Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Slovak Slovenian Spanish Swati Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Zulu
JEHOVHA ndiye ‘Murayiridzi wedu Mukuru.’ (Isa. 30:20) Rudo runoita kuti adzidzise vamwe uye avarayiridze. Somuenzaniso, Jehovha anoratidza Jesu ‘zvinhu zvose zvaanoita’ nokuti anomuda zvakadzama. (Joh. 5:20) Jehovha anotipa “rurimi rwevakadzidziswa” patinenge tichibishaira kuti timukudze uye tibatsire vamwe nokuti anotida isu Zvapupu zvake.—Isa. 50:4.
Dare Rokudzidzisa reDare Rinodzora rinotevedzera rudo rwaJehovha, zvokuti rinoshandisa zvikoro gumi zvesangano kudzidzisa vaya vane chido uye mamiriro ezvinhu akakodzera. Unoona zvikoro izvi sokuratidzwa kwerudo rwaJehovha here?
Nakidzwa nokutsanangurwa kwemamiriro akaita zvikoro zvesangano uye zvakataurwa nevamwe vakazvipinda. Zvadaro zvibvunze kuti, ‘Ndingabatsirwa sei nedzidzo yatinopiwa naMwari?’
BATSIRWA NEDZIDZO YATINOPIWA NAMWARI
Jehovha, “Mwari worudo,” anotidzidzisa kuti upenyu hwedu huve nechinangwa, anotibatsira kukunda matambudziko, uye kuti tifare chaizvo muushumiri hwedu. (2 VaK. 13:11) Kufanana nevadzidzi vemuzana remakore rokutanga, tine zvose zvatinoda kuti tibatsire vamwe, tivadzidzise “kuchengeta zvinhu zvose” zvatakarayirwa.—Mat. 28:20.
Kunyange zvazvo tingasakwanisa kupinda zvikoro izvi zvose, tinogona kubatsirwa nechimwe chete kana kupfuura. Uye tinogona kushandisa mirayiridzo inobva muBhaibheri yatakawana. Tinogonawo kubudirira muushumiri nokushanda nevashumiri vaJehovha vakanyatsodzidziswa.
Zvibvunze kuti, ‘Mamiriro angu ezvinhu anondibvumira kuvavarira kupinda chimwe chezvikoro izvi here?’
Vanamati vaJehovha vanoiona iri ropafadzo kupinda zvikoro izvi zvinokosha uye kudzidziswa nazvo. Dzidzo yaunowana ngaikuswededze pedyo naMwari uye iite kuti ugadzirire kuita mabasa aanokupa, kunyanya riya rinofanira kukurumidza kuitwa rokuparidza mashoko akanaka.
MAMIRIRO AKAITA ZVIKORO ZVESANGANO
Chikoro chaMwari Choushumiri
Vangapinda: Vose vanogara vachiwadzana neungano, vanobvuma zvinodzidziswa neBhaibheri, uye vane mararamiro anoenderana nemitemo yechiKristu.
Kunyoresa: Mutariri weChikoro chaMwari Choushumiri ndiye anonyora vadzidzi.
Sharon, hanzvadzi yakaomeswa rutivi rwemuviri nechirwere chinonzi amyotrophic lateral sclerosis (ALS), anoti: “Chikoro chaMwari Choushumiri chakandidzidzisa kutsvakurudza uye kutaura zvine musoro. Ndakadzidzawo kusangofunga zvandinoda, asi zvinodiwawo nevamwe pakunamata.”
Arnie, mutariri anofambira kwemakore, anoti: “Ndakakura ndichikakama uye ndainetseka nokutarisana nevamwe. Chikoro ichi chakandibatsira kuti ndive nechivimbo uye kuti ndione kuti ndinotokoshawo. Jehovha akandibatsira achishandisa chikoro ichi, kuti ndidzidze kufema zvakanaka pakutaura uye kusarega pfungwa dzichimbeya. Ndinotenda chaizvo kuti ndinokwanisa kurumbidza Mwari muungano uye muushumiri.”
Nguva Yachinotora: Maminitsi 45 pavhiki kwevhiki 16.
Vangapinda: Vaya vanenge vachizogara paBheteri kwenguva refu kana kuti vanenge vauya kuzongobatsira paBheteri kwegore kana kupfuura.
Kunyoresa: Vatsva mumhuri yeBheteri ndivo vanonzi vapinde.
Demetrius, uyo akapinda chikoro ichi kuma1980 anoti: “Chikoro ichi chakavandudza madzidziro andinoita uye chakandibatsira kugadzirira kushanda paBheteri kwenguva refu. Vadzidzisi vacho, purogiramu yacho, uye mazano anobatsira zvakandipa chivimbo chokuti Jehovha anondida uye kuti aida kundibatsira kuti ndibudirire pabasa rangu paBheteri.”
Kaitlyn anoti: “Ndakabatsirwa kuisa pfungwa pane zvinonyanya kukosha, kuva munhu akasimba pakunamata. Chikoro ichi chakaita kuti ndiwedzere kunzwisisa uye kuonga Jehovha, imba yake, uye sangano rake.”
Chinangwa: Kudzidzisa vatariri vanofambira, vakuru uye pamwe pacho vashumiri vanoshumira kuti vaite mabasa avo muungano uye musangano. (Mab. 20:28) Vanodzidza zvine chokuita nemamiriro ezvinhu anenge aripo uye zvinhu zvinobatsira ungano panguva iyoyo. Chikoro ichi chinoitwa pashure pemakore mashomanana ega ega uye Dare Rinodzora ndiro rinosarudza pachinoitwa.
Nguva Yachinotora: Mumakore mashoma apfuura vatariri vanofambira vave vachiita chikoro ichi kwemazuva maviri kana maviri nehafu, vakuru kwezuva rimwe chete nehafu, uye vashumiri vanoshumira kwezuva rimwe chete.
Vangapinda: Vatariri vanofambira, vakuru, kana kuti vashumiri vanoshumira.
Kunyoresa: Vakuru nevashumiri vanoshumira vanokokwa nemutariri wedunhu. Vatariri vanofambira vanokokwa nehofisi yebazi. “Chikoro chacho, kunyange zvazvo chiine zvakawanda zvokudzidza munguva pfupi, chinosimbisa vakuru uye chinovabatsira kuti varambe vachifara uye kuti ‘varambe vachiita sevarume’ mubasa raJehovha. Vakuru vatsva nevaya vava nemakore vanodzidza kufudza nounyanzvi uye kuva vakabatana ‘mukufunga kumwe chete.’”—Quinn (ari pasi apa).
“Chikoro ichi chakanyatsotibatsira kunzwisisa nyaya dzine chokuita nokutenda kwedu, chakatiyambira ngozi dziripo, uye chakatipa mazano anobatsira okufudza makwai. Chokwadi Jehovha akaratidza mutsa nokutibatsira.”—Michael.
Nguva Yachinotora: Vhiki mbiri.
Vangapinda: Mapiyona enguva dzose ava negore kana kupfuura. *
Kunyoresa: Mapiyona anokodzera anosarudzwa uye anoudzwa nemutariri wedunhu.
“Chikoro ichi chakandibatsira kuti ndikunde zvipingamupinyi muushumiri uye muupenyu hwangu,” anodaro Lily (ari kurudyi). Ndavandudza chaizvo pakudzidza kwandinoita, kudzidzisa, uye kushandisa Bhaibheri. Ndava kunyatsokwanisa kubatsira vamwe, kutsigira vakuru, uye kubatsirawo kuti ungano ikure.”
Brenda, uyo apinda chikoro ichi kaviri, anoti: “Chakandibatsira kunyatsonyura mune zvokunamata, kusimbisa hana yangu, uye kuisa pfungwa pakubatsira vamwe. Zvechokwadi, Jehovha ane rupo!”
^ ndima 39 Kana pasina mapiyona matsva anokwana kuti paitwe kirasi, mamwe mapiyona ava nemakore mashanu asina kupinda chikoro ichi angakokwa kuti apindezve.
Chikoro Chevakuru Veungano
Chinangwa: Kubatsira vakuru kuti vaite zvakanaka mabasa avo muungano uye kuti vasimbe pakunamata.
Kunyoresa: Hofisi yebazi ndiyo inokoka vakuru.
Ona zvakataurwa nevamwe vakapinda kirasi yechi92 kuUnited States:
“Chikoro chacho chakandibatsira chaizvo kuzviongorora uye kuona kutarisira kwandingaita makwai aJehovha.”
“Ndagadzirira kunyatsokurudzira vose nokusimbisa pfungwa dzinokosha dziri muMagwaro.”
“Ndicharamba ndichiyeuka zvandadzidziswa kweupenyu hwangu hwose.”
Chikoro Chevatariri Vanofambira Nemadzimai Avo
Chinangwa: Kubatsira vatariri vematunhu neveruwa kuti vashumire ungano zvakanaka pa“vanoshanda zvakaoma pakutaura nepakudzidzisa.”—1 Tim. 5:17; 1 Pet. 5:2, 3.
Vangapinda: Hama yacho inofanira kunge iri mutariri wedunhu kana kuti weruwa.
Kunyoresa: Hofisi yebazi inokoka vatariri vanofambira nemadzimai avo.
“Takawedzera kunzwisisa uye kuonga kwatinoita kuti Jesu ndiye musoro wesangano. Takaona kuti tinofanira kukurudzira hama dzatinoshumira uye kubatsira ungano yega yega kuti inyatsobatana. Chikoro chacho chakatibatsira kunzwisisa kuti kunyange zvazvo mutariri anofambira achipa zano uye pamwe pacho achitomboruramisa hama, chinangwa chake chikuru ndechokudzibatsira kuona kuti Jehovha anodzida.”—Joel, akapinda kirasi yokutanga muna 1999.
Chikoro cheBhaibheri Chehama Dzisina Kuroora
Chinangwa: Kubatsira vakuru nevashumiri vanoshumira vasina kuroora kuita mamwe mabasa musangano raJehovha. Vazhinji vanenge vapinda chikoro ichi vanotumirwa kunoshumira kunzvimbo dzinodiwa vaparidzi vakawanda munyika dzavo. Vamwe vangaendeswa kune imwe nyika kana vachida. Vamwe vanganzi vanova mapiyona chaiwo kwenguva pfupi mundima itsva uye munzvimbo dziri kure uye dziri kwadzo dzoga.
Vangapinda: Hama dzisina kuroora dzine makore 23 kusvika ku62, dzine utano hwakanaka nechido chokunoshumira kunonyanya kudiwa vaparidzi. (Mako 10:29, 30) Vanofanira kunge vava nemakore maviri kana kupfuura vari mapiyona enguva dzose uye makore maviri akatevedzana vari vakuru kana kuti vashumiri vanoshumira.
Kunyoresa: Pagungano redunhu panoitwa musangano une mashoko evaya vanoda kuchipinda.
“Kubatikana nechikoro ichi kwakaita kuti mudzimu waJehovha undichinje nechemukati,” anodaro Rick, akapinda kirasi yechi23 kuUnited States. “Jehovha paanokupa basa rokuita, anokutsigira pabasa iroro. Ndakadzidza kuti ndikaisa pfungwa pane zvinodiwa naMwari kwete zvandinoda, achandisimbisa.”
“Ndakadzidza kuti kushanda kunoita sangano raMwari kwakaita sechishamiso chaicho,” anodaro Andreas, uyo ari kushumira kuGermany. “Chikoro chacho chakandibatsira kugadzirira basa raiva mberi. Mienzaniso yakawanda yemuBhaibheri yakandidzidzisawo chokwadi ichi chinokosha: Kushumira hama dzangu uye Jehovha kunounza mufaro wechokwadi.”
Chikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana
Chinangwa: Kunyatsodzidzisa vakaroorana kuti vashandiswe zvizere naJehovha nesangano rake. Vazhinji vanenge vapinda chikoro ichi vachatumirwa kunonyanya kudiwa vaparidzi munyika dzavo. Vamwe vanganzi vanoshumira kune imwe nyika kana vachida. Vanenge vapinda chikoro ichi vanganzi vanova mapiyona chaiwo kwenguva pfupi mundima itsva uye munzvimbo dziri kure uye dziri kwadzo dzoga.
Nzvimbo: Chikoro ichi chiri kuitwa kuUnited States uye kutanga muna September 2012, chichange chave kuitwawo mumapazi akasarudzwa. Kakawanda kacho chichaitirwa paImba yoUmambo kana kuti Imba Yemagungano.
Vangapinda: Vakaroorana vane makore 25 kusvika ku50 vane utano hwakanaka, uye vanokwanisa kunoshumira chero kunonyanya kudiwa vaparidzi, uye vane mafungiro okuti: “Ndiri pano! Nditumei.” (Isa. 6:8) Vanofanira kunge vava nemakore maviri kana kupfuura varoorana uye vari mubasa renguva yakazara kwemakore maviri akatevedzana kana kupfuura. Murume wacho anofanira kuva nemakore maviri kana kupfuura asi akatevedzana, ari mukuru kana kuti mushumiri anoshumira.
Kunyoresa: Pagungano reruwa panoitwa musangano une mashoko evanenge vachida kupinda chikoro ichi. Kana pamagungano anoitwa munyika menyu pasina misangano yakadaro asi uchida kuchipinda, unogona kunyora tsamba kuhofisi yebazi kuti uwane mamwe mashoko.
“Vhiki dzacho sere dzinochinja zvachose upenyu uye dzinopa mukana wakazonaka kune vakaroorana vanoda kuita zvizhinji mubasa! Tatsunga kusava noupenyu hune twakawanda-wanda, kuti tishandise nguva yedu nokuchenjera.”—Eric naCorina (vari pasi apa), vekirasi yokutanga ya2011.
Chinangwa: Kudzidzisa vadzidzi kuti vave mamishinari anenge achishanda mundima dzine vanhu vakawanda, kuti vave vatariri vanofambira, kana kuti vashandi vepaBheteri. Chinangwa chacho ndechokusimbisa hama mundima uye mumapazi.
Nzvimbo: Watchtower Educational Center, Patterson, New York, U.S.A.
Vangapinda: Vakaroorana vatori mubasa renguva yakazara, vangava mamishinari ari mundima asina kupinda chikoro chacho, mapiyona chaiwo, vatariri vanofambira, kana kuti vashandi vepaBheteri. Vanofanira kuva nemakore matatu akatevedzana kana kuti kupfuura vachishanda pamwe chete mubasa renguva yakazara. Vanofanira kunge vachinyatsogona kutaura, kuverenga, uye kunyora Chirungu.
Kunyoresa: Vakaroorana vangakumbirwa neDare Rebazi kuti vatumire chikumbiro chavo.
Lade naMonique vokuUnited States vari kushumira muAfrica. Lade anoti: “Chikoro cheGiriyedhi chakaita kuti tigadzirire kuenda chero kupi zvako munyika, kusunga dzisimbe, uye kushanda nehama dzedu dzatinoda.”
Chinangwa: Kubatsira vaya vari muMatare Ebazi kuti vatungamirire mumisha yeBheteri, kutarisira nyaya dzeushumiri dzine chokuita neungano uye kutarisira matunhu nemaruwa. Vanodzidzawo nezvebasa rekushandura, kudhinda, uye kutumirwa kwemabhuku.
Vangapinda: Hama yacho inofanira kunge iri muDare Rebazi kana kuti muDare Rinotarisira Basa Munyika.
Kunyoresa: Dare Rinodzora rinokoka hama dzacho nemadzimai adzo.
Lowell naCara, vekirasi yechi25, vari kushumira kuNigeria. “Ndakayeuchidzwa kuti pasinei nokuti ndakabatikana zvakaita sei kana kuti ndapiwa basa rakaita sei, kusimba pakunamata ndiko kunoita kuti ndifadze Jehovha,” anodaro Lowell. “Chikoro chacho chakasimbisawo kuti tinofanira kutevedzera kuda kunoita Jehovha vashumiri vake pamabatiro atinoita vamwe.”
“Pfungwa yandinofungisisa ndeyokuti,” anodarowo Cara. “Kana ndisingakwanisi kutsanangura imwe pfungwa zvinonzwisisika, ndinofanira kutanga ndadzidza nezvayo ndisati ndaedza kuidzidzisa vamwe.”